News | Loan
News | Tag: Loan
वाणिज्य बैंकले घटाए कर्जाको ब्याजदर
काठमाडाैँ । आर्थिक वर्ष २०७५ ०७६ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको आठ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.८० प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । गत आवमा त्यस्तो कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.३३ प्रतिशत रहेको थियो ।
ऋणबाट मुक्ति कसरी पाउने ?
एजेन्सी । मानिसालाई सबैभन्दा सताउने एउटै कुरा छ त्यो हो ऋण ।
नांगो फोटो बन्धकी राखेर ऋण दिने कम्पनीहरु...
एजेन्सी । संसारमा भइरहेका कतिपय कुराहरु सुन्दा नै अचम्म लाग्छ । बैंकले सम्पत्ति, घरजग्गा, सुन आदि धितो राखेर ऋण दिने गरेको त हामीले सुन्दै आएका छौं । तर चीनमा केही यस्ता कम्पनी छन्, जसले व्यक्तिको ‘नांगो फोटो राखेर नै ऋण सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
ऋण नतिर्न यस्ताे नाटक !
एजेन्सी । कोही मानिसलाई ऋणले थिचेपछि मर्नु र बाँच्नुको अवस्था आइपर्छ । कोही देश नै छोडेर भाग्छन् भने कोही अन्य उपाय लगाएर लुकेर बस्ने काम गर्छन् ।
ऋणमा चुर्लम्म डुबेपछि...
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन आग्रह,
काठमाडौँ । व्यवसायका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गदैँ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखी ऋण लिएर व्यवसाय गर्न योग्य नागरिकलाई ऋण लिन आग्रह गरेको हो ।
बैंकमा रकम अभाव, बैंकहरु १० लाखभन्दा बढी ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा
काठमाडौं । लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि बैंकहरुले ठूला ऋणीलाई ‘सरी’ भन्दै फर्काउन थालेका छन्। लगानी गर्ने पैसा (तरलता)को अभाव झेल्दै आएका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु अहिले १० लाखभन्दा बढी रुपैयाँ ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
आजबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ७ लाखसम्म कर्जा लिन पाइने
काठमाडौं । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर शैक्षिक ऋण पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
रामपुर, पाल्पा । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्न थालेका छन् । जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिकाले युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यको शुरुवात गरेको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी प्रस्ताव मागेर कृषि तथा पशुपालनका लागि ऋण दिन शुरु गरेको हो ।